Dowladda Somaliya oo ka hadashay xaaladda caafimaad ee Guddoomiye Yariisow
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka hadashay xaaladda Caafimaad ee Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho C/Raxmaan Cumar Cismaan Yariisow iyo dhaawacyada kale ee Isbitaalka kula jira.
Danjiraha Dowladda Soomaaliya ee Dalka Qadar C/Rizaaq Faarax Cali Taano, ayaa sheegay in xaaladda caafimaad ee bukaannada weerarradii Xarunta aqalka dowladda hoose iyo Qaraxii KM4 ay soo hagaageyso.
Safiir Taano ayaa sheegay in qof ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarkii KM5 islamarkaana gubtay uu ku geeriyooday Isbitaalka Magaalada Dooxa.
Waxaa uu magaca Ninkaas ku sheegay Maxamed Cismaan Cali kaas oo goob Basiin agtaagnaa markii uu qaraxa dhacayay sidaasna ku gubtay.
Danjiraha ayaa sidoo kale sheegay in dhamaan Bukaannada kale ee ay waxyeellada ka soo gaartay qaraxyadii todobaadkii hore ka dhacay Muqdisho ee loo qaaday Dalka Qadar ay soo hagaageyso.
12 Qof oo ku dhaawacmay labada weerar ahaana kuwii ugu halista badnaa ayaa loo qaaday Dalka Qadar,waxaa halkaas ku dhintay mid ka mid ahaa dhaawacyadaas waxaana hadda isbitaalka ku jira 11 Qof sida uu sheegay Danjire Taano.
Dowladda Qadar ayaa diyaarad gaar ah u so dirtay dhaawacyada culus ee ka dhashay weerarkii Arbacadii ka dhacay Magaalada Muqdisho gaar ahaanna aqalka dowladda hoose halkaas oo ay ku dhinteen 8 ruux.
Shalay waxaa isna Magaalada Muqdisho gaar ahaanna Isbitaalka Digfeer ku dhintay mid ka mid ahaa agaasimayaashii ku dhaawacmay weerarkii xarunta Gobolka Banaadir.